Ixesha kunye nabahlobo 6
Xa uthetha ngezinto zokuqala umhlobo ubuza: Yiyiphi intsingiselo ecacileyo yee-elementals zegama, ezisetyenziselwa ezininzi ezinxulumene nama-theosophist kunye nama-occultist?
Isiseko sezinto ezisezantsi kwenqanaba lomntu; umzimba wento edityaniswe yenye yezinto ezine. Yiloo nto igama elisisiseko. intsingiselo okanye yeento zeempawu. Iifilosofi zeendaba zosasazo ezaziwa ngokuba ziRosicrucians zahlulahlulahlulahlula izinto zaza zaba zine, zadibanisa iklasi nganye kwenye yezinto ezine eziphathwe ngabo njengomhlaba, amanzi, umoya nomlilo. Ewe kuya kukhunjulwa ukuba ezi zinto azifani nezinto zethu ezibuthathaka. Umhlaba, umzekelo, ayisiyiyo into esiyibona ngathi ujikeleze thina, kodwa eyona nto iphambili isekelezwe phezu kwayo umhlaba. IiRosicrucian zathiya izinto zomhlaba, iingca zomhlaba; ezo zamanzi, iilines; ezo, umoya, iisilphs; kunye nezo zomlilo, ii-salamanders. Nanini na xa indawo yenye yezinto inikezwe isikhokelo ngcinga enzulu yomntu, le ngcinga ithatha ubume bayo kwizinto eziyilo kwaye ivele njengeqhekeza elenzelwe into leyo, kodwa umzimba wayo ungowale nto. Ezo zinto zingadalwanga ziingcamango zabantu ngeli xesha lokuvela kwendaleko zathi zakubakho, ngenxa yempembelelo kwithuba langaphambili lokuvela kwezinto. Ukudalwa kwesiseko kungenxa yengqondo, yomntu okanye yendalo iphela. Izinto eziphambili ezaziwa ngokuba zii-elementals zomhlaba zikuso ngokwazo zodidi ezisixhenxe, kwaye ezo zihlala kwimiqolomba nasezintabeni, kwimigodi nakuzo zonke iindawo zomhlaba. Bangabakhi bomhlaba neiminerali kunye neentsimbi. Imilambo ihlala kwimithombo, imilambo, iilwandle, kunye nokufuma komoya, kodwa kuthatha indibaniselwano yamanzi, umoya kunye nezinto zomlilo ukuvelisa imvula. Ngokubanzi kuthatha indibaniselwano yeeklasi ezimbini okanye ezingaphezulu zezinto ukuvelisa nayiphi na into yendalo. Ke iikristale zenziwa ngokudibana komhlaba, umoya, amanzi kunye nezinto zomlilo. Kunjalo ke ngamatye anqabileyo. Isilphs ihlala emoyeni, emithini, kwiintyatyambo zamasimi, ematyholweni, nakulo lonke ulawulo lwemifuno. I-salamanders zezomlilo. Idangatye likhona ngokubakho kwe-salamander. Umlilo wenza ukuba isalamander ibonakale. Xa kukho idangatye sibona enye yenxalenye yesalamander. Izixhobo zomlilo zezona zingasebenziyo. Ezi zinto zine ziyahlangana xa kuveliswa imililo, izaqhwithi, iinyikima zomhlaba, kunye nenyikima.
Ithetha ntoni le nto ithi 'ngumntu?' Ngaba ukhona umahluko phakathi kwayo nengqondo esezantsi?
Into eyintloko yomntu liziko eyadityaniswa yindoda xa yayiqala ukwenzeka emzimbeni kunye nokudibana nayo nokudibana komzimba ngamnye ekwakheni umzimba wayo. Iqhubekeka kuyo yonke iminako yengqondo ide ithi, ngokunxulumana nengqondo ende, ifumane intsholongwane okanye isiqaqa sokuziva. Ayiseyonto eyomntu, koko ingqondo esezantsi. Ukusuka kwinto yabantu kuvela i-linga sharira. Into esisiseko yomntu yinto eseMadame Blavatsky "Imfihlo yeMfundiso" ebizwa ngokuba yi "bharishad pitri," okanye "ukhokho wenyanga," kanti umntu, u-Ego, ngoka-agneswatta pitri, womnatha welanga, unyana welanga.
Ngaba kukho i-elemental yokulawula iminqweno, enye inokulawula imikhosi ebalulekileyo, enye inokulawula imisebenzi yomzimba, okanye ingaba ulawulo lwamaqela oluntu luzo zonke ezi zinto?
Isiseko somntu silawula zonke ezi zinto. I-linga sharira yi-automaton eqhuba iminqweno yento yomntu. I-bharishad pitri ayifi ngokufa komzimba, njengoko kunjalo nange-linga sharira. I-linga sharira, umntwana wayo, iveliswa kuyo ngenxa yokwenziwa komzimba ngamnye. I-bharishad injengomama osebenza ngengqondo yokuvela ngokutsha okanye i-Ego, kwaye ukusuka kwesi senzo kuveliswe i-linga sharira. Isiseko somntu silawula yonke imisebenzi ekhankanyiweyo kumbuzo, kodwa umsebenzi ngamnye wenziwa yinto eyahlukileyo. Isiseko selungu ngalinye lomzimba liyakwazi kwaye lilawula kuphela ubomi obuya kwenza ilungu, kwaye lenze umsebenzi walo, kodwa lingazi nto kuwo nawuphi na umsebenzi walo naliphi na elinye ilungu, kodwa into eyomntu ibona ukuba yonke le misebenzi iyenziwa. kwaye zinxulumene omnye komnye ngokuvisisanayo. Zonke iintshukumo ezenzekelayo zomzimba ezinjengokuphefumla, ukugaya, ukutsha, zonke zilawulwa sisiseko somntu. Lo ngumsebenzi we-buddhic kwimizimba yenyama yomntu. Kwi Isihleli so "Consciousness," ILizwi, Vol. Mna, iphepha 293, kwathiwa: "Imeko yesihlanu yomcimbi yingqondo yomntu okanye ndingu-I-I. Ngexesha leminyaka engenakubalwa, i-atom engenakubalwa eye yakhokelela kwezinye iiatom kumaminerali, ngokusebenzisa imifuno, kunye ukuya kwisilwanyana, ekugqibeleni ifikelela kwisimo esiphakamileyo somcimbi oboniswe ukuQaphela okukodwa. Ukuba liqela elilelinye kwaye unombonakaliso woLwazi ngaphakathi, icinga kwaye iyathetha njengam, kuba ndiluphawu lwaLowo. Umbutho woluntu uye phantsi kwesikhokelo sayo umzimba olungelelanisiweyo wesilwanyana. Umzimba wezilwanyana unyanzelisa ilungu ngalinye lazo ukuba lenze umsebenzi othile. Umbutho wecandelo ngalinye uyalela iseli nganye ukuba yenze umsebenzi othile. Ubomi beseli nganye bakhokela iimolekyuli nganye ekukhuleni. Uyilo lwe molekyuli nganye luhlanganisa i-atom nganye ukuba ibe ngendlela elungeleleneyo, kwaye ukuQaphela kubethelela i-atom nganye ngenjongo yokuzazi. Iathom, iimolekyuli, iiseli, amalungu, kunye nezilwanyana, zonke ziphantsi kolawulo lwengqondo-imeko yokuziqonda imeko-umsebenzi wengcinga. Kodwa ingqondo ayifumani ukuzazi, nto leyo iphuhlise ngokupheleleyo, ide ibe yoyise kwaye yalawula yonke iminqweno kunye neembono ezifunyenwe ngeemvakalelo, kwaye igxile kuyo yonke ingcinga kuLwazi njengoko ibonakaliswa ngaphakathi. ”Ibharishad ngumphefumlo wentambo. umzimba nje nge-aginnwatta pitri ngumphefumlo wengqondo. "Ngaba ikho into elawula iminqweno?" Hayi. I-like rupa inolwalamano olufana ne-Ego njengoko ilinga sharira isemntwini. Kuphela kuxa i-linga sharira iyi-automaton yomzimba, i-like rupa yeyona automaton yeminqweno yesiphithiphithi ehambisa umhlaba. Iminqweno yehlabathi ihambisa i-like rupa. Yonke into edlulayo ibetha i-like rupa. Ke i-linga sharira iyashukuma kwaye ihambisa umzimba ngokwempembelelo okanye imiyalelo yento yomntu, i-kama rupa, okanye i-Ego.
Ingaba ulawulo olufanayo lwezinto ezisisiseko kunye nezenzo zomzimba kunye nemisebenzi engenamsebenzi yomzimba?
Ayikho into efana nokungazi nto okanye isenzo. Kuba nangona umntu enokuthi angayazi imisebenzi okanye isenzo somzimba wakhe, into eyongayo yecandelo okanye umsebenzi ngokuqinisekileyo uyayazi, kungenjalo ngekhe isebenze. Into efanayo ayihlali isenza yonke imisebenzi okanye izimbo zomzimba. Umzekelo, into yomntu yongamela umzimba uphela nangona ingangayazi into eyahlukileyo nesebenzayo le nto ebomvu yegazi.
Ngaba zizinto ezibalulekileyo kwiinkampani eziguqukayo eziqhelekileyo, kwaye ngaba bonke okanye nawuphi na kubo kwiinkqubo zokuziphendukela kwemvelo baba ngabantu?
Impendulo ngu-ewe kuyo yomibini le mibuzo. Umzimba womntu yindlu yesikolo yazo zonke izinto eziphambili. Emzimbeni womntu zonke iiklasi zazo zonke izinto eziphambili zifumana izifundo kunye nemiyalelo; kwaye umzimba womntu yiyunivesithi enkulu apho kuzo zonke izidanga abafunda izidanga ngokwamabanga abo. Into esisiseko somntu ithatha inqanaba lokuzazi kwaye kwithuba layo emva koko, njenge-Ego, yongamela enye into esisiseko esiba ngumntu, nazo zonke izinto ezisezantsi, kanye njengokuba i-Ego emzimbeni isenza ngoku.